Premier Leauge Archives - Myanmar Sports Villages
ဥရောပရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ကွင်းလယ်လူ နှစ်ဦးကို ဂွတ်ဆင်ပတ်ခ်သို့ ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် #အဲဗာတန်
အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်လာဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ မာဆေးဆိုက်ဒ်ကလပ် အဲဗာတန်အသင်းဟာ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ အလိုရှိနေတဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ကွင်းလယ်လူ (၂) ဦးကို ခေါ်ယူပေးလိုက်ပါပြီ။ အန်ဆယ်လော့တီဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နှင့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်စဉ်က တောက်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့သည့် ရီးရဲလ်ကစားသမား ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ် နှင့် နာပိုလီအသင်းကွင်းလယ်လူ အယ်လန်တို့ကို အစောပိုင်းကတည်းက ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ Daily Mail သတင်းစာမှာတော့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားရွှေဖိနပ်ဆုရှင် ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ်ဟာ ယနေ့မှာပင် (၃)နှစ်စာချုပ်နှင့် အဲဗာတန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ် နှင့် အတူတူ ရောက်ရှိလာမည့် ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူ အယ်လန်သည်လည်း အဲဗာတန်အသင်းကို ပေါင်(၂၁.၇) သန်း + Add-ons (၂.၆)သန်း ဝန်းကျင်ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု သိရပါတယ်။ အယ်လန်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို ယနေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားဖို့ရှိနေပြီး နာပိုလီဥက္ကဌ ဒီလော်ရန်တစ်က အယ်လန်ဟာ ပြီးခဲ့သည့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေကတည်းက...
Categories Ligue 1/Premier Leauge
ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့မဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ကို သတိပေးစကားဆိုခဲ့သည့် ဗန်ပါစီ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရော်ဘင်ဗန်ပါစီက မကြာခင်အချိန်အတွင်း အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ ပြောင်းရွှေ့တော့မည့် နယ်သာလန်လက်ရွှေးစင် ဗန်ဒီဘိခ်ကို မပြောင်းခင်မှာ သတိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ဆေးစစ်မှု အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ယူနိုက်တက်သို့ တရားဝင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မပြောင်းရွှေ့ခင်မှာတော့ နယ်သာလန်လက်ရွှေးစင်ဟောင်း ဗန်ပါစီက ယူနိုက်တက်မှာ ကစားမယ်ဆိုရင် ကျရောက်လာမည့် ဖိအားဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် နေထိုင်သင့်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒွန်နီက အခုမှ အသက် ၂၃ ပဲရှိသေးတယ်။ ဒီအရွယ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ငယ်တုန်းက အာဆင်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပဲ။ ပြီးတော့ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ်ကစားသမားဘဝကို အမြဲတွေးနေခဲ့တယ်။ ဖီယင်နော့နဲ့ UEFA ဖလားရတာက ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်သင်းသင်းနဲ့ ရလိုက်မယ်ဆိုရင် အနေအထားတွေက ကွာခြားသွားပြီ။ ဒွန်နီကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က အဓိက ခေါ်ယူသွားတဲ့အနေအထားပါ။ ဒီလိုမျိုး အသက် ၂၂...
ယူနိုက်တက်ကို ရွှေးချယ်ခဲ့တဲ့ လက်ရွှေးစင်အသင်းဖော် ဗန်ဒီဘိခ်ကို ချီးကျူးခဲ့သည့် ဗန်ဒိုက်
မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၅.၇ သန်းနဲ့အတူ ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်တော့ ဒီနွေရာသီအတွက် ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် ဥရောပအသင်းကြီးတွေ အလိုရှိနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးပါ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တော့ လက်ဦးမှုရယူပြီး ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မြေကို ရောက်ရှိလာတော့မဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်အတွက် လက်ရွှေးစင်အသင်းဖော် ဗန်ဒိုက်က ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ “ဒွန်နီ(ဗန်ဒီဘိခ်) အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါစေလို့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို၊ နယ်သာလန်လက်ရွှေးစင်အသင်းအတွက်လည်း အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်စေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ ဒါဟာ ဒွန်နီအတွက်တော့နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ထို့အတူ နာသန်အကီကိုလည်း ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်” လို့ ဗန်ဒိုက်က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်၏ ဖခင် အန်ဒရီဗန်ဒီဘိခ်ကလည်း ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ Sports Village
Breaking News: စီဘယ်လော့စ်တစ်ယောက် အာဆင်နယ်ကို အဌားနဲ့ ပြန်လာပါပြီ…….
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက အာဆင်နယ်အသင်းမှာ အဌားစာချုပ်ဖြင့် တစ်ရာသီလာကစားပြီး ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ ဒန်နီစီဘယ်လော့စ်ဟာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အာဆင်နယ်အသင်းဆီကို အဌားတစ်ရာသီနဲ့ လာရောက်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်နည်းပြ မီကေးလ်အာတီတာက စီဘယ်လော့စ်ကို ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာဖို့အတွက် စီဘယ်လော့စ်ကို စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စီဘေယ်လော့စ်ကို စပိန်ကလပ် (၃) သင်းက ကမ်းလှမ်းထားပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်က အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွှေးချယ်သည့်အတွက်ကြောင့် အမ်းမရိတ်မြေမှာ တကျော့ပြန်ခြေချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် ဒီတပတ်အတွင်းလောက်မှာပဲ လိုင်လီနောက်ခံလူ ဂါဘရီရယ်မန်ဂါဟေးစ်ကို တရားဝင်ကြေငြာသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ကစားသမားနဲ့ရော ၊ လိုင်လီအသင်းနဲ့ပါ အားလုံးသဘောတူညီမှုရရှိထားသော်လည်း တရားဝင်ကြေငြာဖို့အတွက် ကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေဆဲပါ။ လိုငွေပြနေတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ယခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ကစားသမားများစွာ ကို ထုတ်ရောင်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသင်းမှာကစားခွင့်မရဘဲ အရံခုံမှာထိုင်နေရတဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် နှင့် ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ်တို့ကို ရောင်းချသွားမှာပါ။ အဲဗာတန်အသင်းဟာ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့...
ယခုတပတ်အတွင်းမှာပင် ဗန်ဒီဘိခ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို တရားဝင်ကြေငြာသွားမည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပေါင် ၃၅.၇ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုတပတ်အတွင်းမှာပင် အပြောင်းအရွှေ့ကို တရားဝင်ကြေငြာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နှင့် (၅) နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ သဘောတူညီထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရာသီအတွင်း ဗန်ဒီဘိခ်ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာ အပါအဝင် ဥရောပအင်အားကြီး ကလပ်များက စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်းအတွင်းမှာပင် ဗန်ဒီဘိခ်၏ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ နှင့် တကွ အေဂျက်စ်အသင်း အမှုဆောင်ချုပ် ဗန်ဒါဆားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဗန်ဒီဘိခ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပတ်သတ်၍ အေဂျက်စ်အသင်းနည်းပြ တန်ဟန့်ခ်က ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “သူ(ဗန်ဒီဘိခ်)မရှိတော့ပေမယ့်လည်း အသင်းရဲ့တိုးတက်မှုဟာ အမှန်တကယ်ရှိနေဆဲပါပဲ။ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါ။ မကြာခင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်က တရားဝင်ကြေငြာသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒွန်နီ(ဗန်ဒီဘိခ်) နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောစရာရှိတဲ့တချက်က သူက...
မက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့ လီဗာပူးလ်မှာ အခွင့်အရေးမရှိပါဘူးလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဂျာဂင်ကလော့ပ်
မနက်ဖြန်ည မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၀ နာရီအချိန်မှာတော့ လီဗာပူးလ် Vs အာဆင်နယ် ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲစဉ်ကို ကစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမတိုင်ခင် ထုံးစံအတိုင်း ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဒဏ်ရာပြသာနာ၊ လူစာရင်း၊ အပြောင်းအရွှေ့အစရှိသည့် အကြောင်းများကို ဂျာဂင်ကလော့ပ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ပ်ရဲ့ လီဗာပူးလ်ဟာ ဒီနှစ် ရာသီကြိုခရီးစဉ်အဖြစ် သြစတြေးလျတိုက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကာ ဂျာမန်ကလပ် စတုဂတ် နှင့် သြစတြီးယားကလပ် RB ဆဲလ်ဘတ်စ်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းပွဲ (၂) ပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပွဲကစားခဲ့ရာမှာ စတုဂတ်ကို (၃-ဝ) ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဆဲလ်ဘတ်စ်အသင်းကို (၂-၂) ဖြင့် သရေကျခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပွဲစလုံးမှာ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဘရူစတားက သွင်းဂိုး (၃) ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲမှာ ဘရူးစတားတစ်ယောက်ပါဝင်လာလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ပြောကြားသွားတဲ့ ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ အရေးကြီးသော Key Points များကိုသာ...
စီဘယ်လော့စ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရရှာတဲ့ #အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ စီဘယ်လော့စ်ကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ စီဘယ်လော့စ်ဟာ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက အာဆင်နယ်အသင်းမှာ တစ်ရာသီကြာ အဌားဖြင့် လာရောက်ကစားပြီး အင်္ဂလန်မြေမှာ အံဝင်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေကစားနိုင်တဲ့ စပိန်ကစားသမား စီဘယ်လော့စ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ စီဘယ်လော့စ်ဟာ အနေဖြင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ဆက်နေမည်ဆိုပါက ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တစ်နေရာရဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကစားသမားနှင့် အာဆင်နယ်အသင်းကြားဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသော်လည်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့် တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ အာဆင်နယ်အသင်းကလည်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်တစ်ခုပေးကာ စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပြီး အဆင်မပြေခဲ့ပါက တခြားကစားသမားတစ်ယောက်ကို အစားထိုးခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိပါတယ်။ အတက်နိုင်ဆုံးစီဘယ်လော့စ်နဲ့ ပတ်သတ်၍ အာတီတာက အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ “ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒန်နီကြားမှာ စကားပြောဆိုတာလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒန်နီကလည်း သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လိုပဲ သူလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီးသားပါ” ”...
လီဗာပူးလ်နှင့် ကွန်မြူနတီဒိုင်း ပွဲစဉ်မတိုင်ခင် ကွာရန်တင်းဝင်နေရသည့် ကစားသမား(၄) ဦးအထိ ရှိနေသည့် အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြ အာတီတာက မနက်ဖြန် ကစားရမည့် လီဗာပူးလ်နှင့် ကွန်မြူနတီဒိုင်း ပွဲစဉ်ဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီရဲ့ ကန့်လန်ကာအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်သော်လည်း ဒီအချိန်က ကစားဖို့ သင်တော့်တဲ့အချိန်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမတိုင်ခင် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကစားသမား (၄) ယောက်လောက်ကို ကွာရန်တင်းထဲထည့်ထားရပြီး သီးသန့်ခွဲထားရတဲ့အတွက် ထရိန်နင်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးနောက်ကျကုန်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက FA ဖလား ရရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် တဖက်က ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရရှိသည့် လီဗာပူးလ်အသင်းနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပြီး ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲစဉ်ကို ကစားသွားရမှာပါ။ ကစားသမားတချို့ကို လက်လွှတ်ထားရသည့်အတွက်ကြောင့် ဒီပွဲကို ကစားဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင့် အာတီတာက ညည်းတွား ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကွာရန်တင်းထဲရောက်နေသည့် ကစားသမား (၄) ဦး၏ အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေမယ့် အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းမိသလောက် ပြောရရင် ဂိုးသမား မာတီနက်ဇ်က ထိပ်ဆုံးကဖြစ်ပါတယ်။ မာတီနက်ဇ်ဟာ အားလပ်ရက်ကာလအတွင်း မိသားစုနှင့်အတူ ပေါ်တူဂီသို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ UK သို့...
ဒင်းဟန်ဒါဆင် နဲ့ ဒီဂီယာ နှစ်ယောက်ထဲက နောက်နှစ် ဘယ်သူ့ကို နံပတ်တစ်-ဂိုးသမားအဖြစ် သုံးမှာလဲ ဆိုးလ်ရှား ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ကစားသမားအသစ်ကို မခေါ်ရသေးပေမယ့် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်က ပြန်လာတဲ့ ဂိုးသမား ဒင်းဟန်ဒါဆင်ကို ၅ နှစ်စာချုပ် သက်တမ်းတိုးခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဒါဆင်ဟာ လာမည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကစားမည့် အင်္ဂလန်အသင်း၏ UEFA နေးရှင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖို့ လက်ရွှေးစင်အသင်းလူစာရင်းမှာ စတင်ရွှေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဟန်ဒါဆင်ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက် ကစားသမားစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ယူနိုက်တက်ရဲ့ လူငယ်အကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဟန်ဒါဆင်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လီဗာပူးလ်ဂိုးသမား အယ်လီဆွန်၊ ယူနိုက်တက်ဂိုးသမား ဒီဂီယာ၊ လက်စတာစီးတီး ဂိုးသမား ကတ်စပါရှမိုက်ကယ်တို့နှင့် တန်းတူ Clean Sheet (၁၃) ကြိမ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလို၊ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆု စကာတင်စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဒါဆင်ပြန်လာပြီဆိုတော့ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ခေါင်းစားမဲ့ ပြသာနာတစ်ခုတိုးလာပါပြီ။ ဟန်ဒါဆင်၊ ဒီဂီယာ၊ ရိုမဲရိုး (၃) ယောက်ထဲမှာ ရိုမဲရိုးဟာ ထုံးစံအတိုင်း...
လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတိုများ (02/09/2020)
ဟီဂူအင်ကို ထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြင့် ပြန်လည်အစားထိုးသွားမည့် ဂျူဗင်တပ်စ်